Unique banner danda Vagadziri - China Unique banner danda Suppliers & Factory
T banner ndechimwe chezvimiro zvakasiyana-siyana, inozivikanwawo se sharkfin banner munyika shoma.Vane kumucheto kwepamusoro kwakakomberedzwa uye vanenge vane "teardrop" chimiro.T banner isarudzo huru kana iwe uchida chimwe chinhu chakafanana neino zivikanwa feather flag kanamureza unobhururukazvemukati nekunze zvekumaka semazuva egorofu, zviitiko zvekumaka mota nezvimwe.
Kushambadzira Magnum Banner, yakasarudzika uye yakashongedzwa banner yakamira ine chimiro chegirazi rewaini, iri nyore kuunganidza uye kubvisa, yakareruka uye inotakurika, inodhura yekuratidzira maturusi ekumaka uye kushambadzira.Kunyangwe mukati kana kunze kwezuva rine mhepo, iyo yakasimba mureza weMagnum banner inomira kureba uye kukwezva kutarisa.
W banner inotumidzwa zita remafungu ayo akanaka.Kukotama zvishoma mudanda kunovimbisa kuti wave mureza unogara uchiratidzwa uye wakanaka pakushambadzira kushambadzira.mureza chimiro chinogona kuchinjwa seFlutter murezas.Pole yakagadzirwa nekabhoni composite zvinhu inogona kukuvimbisa iwe kushandisa kwenguva yakareba nguva.Inowanikwa mu2 size.
U banner chimiro chakasiyana chine nzvimbo huru yekuratidzira.Unogona kuve nedivi rimwechete kana maviri akadhindwa kuratidza mameseji ako.Yakagadzirwa kubva kabhoni composite zvinhu inogona kukuvimbisa iwe kwenguva yakareba uchishandisa nguva.Isarudzo yakanaka kuparadzira mameseji ako kana logo.
R banner ndeimwe yeakasarudzika inotakurika banner stand ine jira rakazara tensioned uye yakafara nzvimbo yekudhinda.Yakanakira kuratidzwa, mayadhi emota uye zviitiko zvemukati kana kunze.Pole yakagadzirwa nekabhoni composite zvinhu inogona kukuvimbisa iwe kushandisa kwenguva yakareba nguva.Saizi mitatu iripo.
Pinpoint flag, inozivikanwawo seBubble banner, mabhena mahombe anotakurika ane chimiro chakasarudzika senge chicherechedzo chenzvimbo pamepu, anonyanya kushandiswa kuzviitiko, nzvimbo dzekutengesa, chiitiko chekusimudzira, kana kupi zvako kwaunoda kukwevera kutarisisa kwemutengi.
Ndiyo mhinduro yakanakira yenzira dzekumisa traffic, kutsigira uye kushambadzira kunoratidza zvese mukati nekunze!Maka nzvimbo yako uye uonekwe neyakadhindwa banner.
P banner dhizaini yakasarudzika ine semicircle chimiro uye tensioned jira banner.Unogona kuve nedivi rimwechete kana maviri akadhindwa kuratidza mameseji ako.Yakagadzirwa kubva kabhoni composite zvinhu inogona kukuvimbisa iwe kwenguva yakareba uchishandisa nguva.Yakanakira kuratidzwa, mayadhi emota uye zviitiko zvemukati kana kunze.